Saadaalin: Ganacsigaagu Wuxuu Noqon Doonaa Ganacsi E-commerce | Martech Zone
Ma aragtay kaayagii goobta cusub ee la furay? Runtii waa wax layaableh. Waxaan ka shaqeynaynay nashqadaha iyo horumarinta daabacaadayada in ka badan 6 bilood mana kuu sheegi karo inta aan qaadanay. Arrintu waxay ahayd mid fudud inaannaan horumarin karin si dhakhso leh oo dhammaystiran oo ku filan. Fikradayda, qofkasta oo dhisaya mawduuc laga soo bilaabo maanta wuxuu wax u dhimayaa ganacsiga ay la shaqeynayaan.
Waan awooday inaan baxo oo aan qarash gareeyo $ 59 oo ku saabsan mawduuc joornaal dijitaal ah, wuxuu u dhisay mawduuc caado u ah isdhexgalkayaga caadada ah, dib-u-maqaar-saarista sumadda mawduuca, aniguna waan kacay oo waan socday toddobaadkan gudihiisa. Weli waxaan sii wadaynaa soo saarista xoogaa isku dhaf ah, sida Podcast-keena iyo maktabada Caddaanka Cagaaran, laakiin waad layaabi doontaa waxa ku yimid mowduuca.
Hal dhinac oo ahaa waajib ayaa ahayd inay la timid WooCommerce si buuxda isugu dhafan. Woo, oo ay weheliso mawduucyadeeda iyo mashiinkeeda ganacsiga, ayaa ahaa dhawaan ay iibsatay shirkadda Automattic - shirkadda iska leh WordPress. Fikradayda hoose, waxaan aaminsanahay inay tahay go'aan fiican. Sababta Sababtoo ah waxaan saadaalinayaa in shirkad kasta - midkoodna B2B ilaa B2C - ay yeelan doonto qayb ka mid ah is-adeegsiga amar ku bixinta shabakadda.
Tafaariiqleyda iyo shirkadaha e-commerce ayaa durbaba dusha ka saaran. Mid ka mid ah durbaanka garaacaya ee garaacaya IRCE ee Chicago wuxuu ahaa inaysan ahayn iibinta dukaankaaga bartaada. Waxay ku saabsanayd iibinta dukaanka dadka kale ee ku yaal goob kasta oo kale. Tafaariiqleyda yaryari waxay leeyihiin nidaamyo saad, nidaamyo wax ku ool ah, iyo nidaamyo fulineed oo u oggolaanaya inay ku iibiyaan dhammaan daraasiin bakhaarro intarneedka ah marka laga reebo tiirarkooda.
Xaqiiqdu waxay tahay macaamiisha (iyo ganacsiyada) inay aaminaan barta ay wax ka iibsadaan. Haddii aad wax ka iibsaneyso Amazon si joogto ah, ma iibsanaysid gogosha dabaqa dambe ee suuqyada nin ka socda internetka. Laakiin haddii ninkaasi internetka ku iibinayo sariirtiisa dabaqa Amazon sidoo kale, waad iibsan doontaa.
Horaad u lumisay iibka khadka tooska ah
Kahor intaanan aadin Chicago, waxaan ka helay email Dalka oo dhan caymiska ee aan u baahnaa inaan ku bixiyo biilka baabuurkeyga. Waxaan galay koontadayda, mana aanan helin wado aan ku bixiyo biilka. Waxaan ku soo noqday shaqadii waxaanan is tusay inaan mar dambe wici doono wakiilkayga. Dhowr maalmood ka dib, waxaan helay ogeysiis kale oo sheegaya in caymiskaygu uu sii joogi doono haddii aanan bixin biilka. Waan soo galay oo mar labaad ayaan isku dayay si aan waxba u tarin - xitaa ma aanan helin a bixi biilkayga badhanka ay interface cusub nadiif ah. Waxaan dejiyay xusuusin aan ku waco wakiilkayga.
Maalintii xigtay, waan aaday shaqada waana mashquulay waligayna ma wicin wakiilkayga. Markii aan guriga imid, waa hubaal in uu jiray emayl in caymiskaygu dhacayo habeenkaas saqda dhexe maxaa yeelay ma aanan bixin biilkayga. Ma fiicna… Waxaan u waday Chicago maalinta ku xigta mana aanan noqon doonin caymis.
Marka waxaan rogrogay biraawsarkayga Geico. Daqiiqado yar kadib, waxaan helay xigasho-waqtiga dhabta ah iyo badhan baruur fiican oo aan ku iibsado siyaasada. Waxaan dhagsiiyey batoonka oo wuxuu cadeeyay inay ii soo diri doonaan waraaqo yar oo boostada ah markii aan buuxiyana, siyaasadaydu way noolaan laheyd. Waa inaad igu ciyaareysaa.
Ku xig - Progressive. Waxaan galay macluumaadkeyga waxayna sii diyaariyeen macluumaadkeyga gawaarida aniga iyo gabadheyda labadaba. Dhawr guji kadib waxaan haystay siyaasad cusub iyo kaar caymis oo aan ku dhigo gaadhigayga. Waxay qaadatay 10 daqiiqo… aniguna runtii sameeyey lacag dhig. Tani waxay iga yaabisay tan iyo markii aan la joogay Qaranka oo dhan in ka badan 20 sano.
Miyey waddanka oo dhan iga lumisay caymiskeedii dartiis? Maya, waxba kama qabin caymiskooda runtiina waan ka helay wakiilkeyga. Way iga lumiyeen si fudud maxaa yeelay kumaba adeegi karin khadka tooska ah.
Ganacsigaaga iyo ganacsigeygu waxba kuma kala duwana. Boggeena cusub ayaa si buuxda ganacsi awood u leh waxaanna bilaabi doonnaa inaan ku iibino wax soo saar iyo adeegyo toos ah akhristayaashayada. Shaki iigama jiro in tani ay noqon doonto dakhli sii kordhaya oo horay usocda iyo in howlaha gacanta ee wakaalada ee aan hada siino macaamiil badan ay si tartiib tartiib ah u yaraanayaan.
Waxba igama gelin haddii aad caws jareyso ama aad fureyso - sida dadku u sii saadaaliyeen in shirkad kasta ay noqon doonto daabice, saadaashaydu waxay tahay in shirkad kasta ay yeelan doonto goob ecommerce goor dhow iyo goor dambe!
Tags: caymiska baabuurta ee khadka tooska ahautomattice-commerceecommercegeicocaymiskadalka oo dhancaymiska internetkadalbashada khadka tooska ahdukaanka onlinehorusocodwoowoocommercecodad
Waa maxay Xayeysiinta Barnaamijku & Suuqgeynta?